Ibhokisi yesidlo sasemini
Ukulungiselela kwangaphambili kwePET
Umatshini wengqekembe weGumball
U-Yjie utyikitye isivumelwano sentsebenziswano neQela le-Wutan Zhongda
ngomphathi ku 20-10-12
Ngentsasa ka-Agasti 5th, umsitho wokutyikitywa kwesivumelwano sentsebenziswano phakathi kwe-YJIE PLASTICS CO., LTD kunye neqela le-Wutan Zhongda kwiSithili saseHuangyan sabanjelwa eTaizhou. U-Wang Tingge, ongusihlalo we-China National Resources Group, kunye no-He Yitao, umphathi jikelele we-YJIE, baye kwi-t ...
Indlela yokuphucula umgangatho ekubumbeni ishishini Huangyan
Emva kwemini ka-Agasti 27, "Nceda uze kuthethathethwano" - "Ungayiphuhlisa njani imboni ekumgangatho ophezulu yeHuangyan" kunye ne "Ikomiti yezoQoqosho yangasese". U-Yitao umele u-Huangyan YJIE iiplastikhi ze-Co, ltd ukuba athathe inxaxheba. Ukujolisa ...
U-Huangyan Yjie uthumele i-352,700 yuan kubafundi abahlwempuzekileyo
Kutshanje, i-Huangyan YJIE Plastics Co., Ltd Abasebenzi baququzelele ukwenza imisebenzi yokuncedisa abafundi ekwindla ye-2020. Phantse amavolontiya angama-50 avela kwiNkampani aye esikolweni athumela iigranti kunye nezinto zesikolo kubafundi abangama-242 abahlwempuzekileyo kwesi sithili. Izibonelelo zizonke zazingama-352,70 ...
Cwangcisa iBarware, Ukupakisha Bottle yewayini, I-Barware yokukhuthaza, Iplastiki yeBarware, I-Barware engenakuqhekeka, Ukutya IBakala iibhotile zePet,